Sales qalabaynta waa nidaam loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad natiijooyin wanaagsan ka hesho kaaga iibka kooxda iyaga oo ka saaraya wakhtiga iyo hawlaha soo noqnoqda ee shaqadooda maalinlaha ah. Hadafka ee iibka qalabaynta waa inuu kaa caawiyo inaad wax badan ku qabato wakhti yar si aad wakhti badan ugu qaadato inaad qabato waxyaabaha muhiimka kuu ah ganacsi iyo xirfadaada. Kartida otomatiga iibka hawlo si ay dadka wax iibinaya ay diiradda u saaraan waxyaalaha ugu muhiimsan, sida xidhitaanka heshiisyada. Iibiyeyaashaadu waxay ku qaadan doonaan wakhti yar shaqada maamulka iyo wakhti badan oo ku saabsan raadinta, xidhitaanka heshiisyada, iyo samaynta iibka. Hab fiican oo aad ku xorayn karto wakhtigaaga si aad diiradda u saarto qiimaha sare iibka hawlaha sida raadinta iyo baritaanka macaamiisha alaabtaada ama adeegaaga. Waa muhiim in la helo nidaam kuu ogolaanaya inaad si fudud ula xiriirto macaamiisha iyo rajada adiga oo aan saacado ku qaadan raadinta cinwaannada iimaylka ama lambarrada taleefanka.
Saddexda tiir ee iibka qalabaynta waa CRM, marketing qalabaynta, Iyo iibka qalab. CRM waa nidaamka maaraynta xiriirka macaamiisha. Haddii aadan haysan CRM waxaad lacag kaga tagaysaa miiska. CRM (Maareynta Xiriirka Macaamiisha) waa qalab muhiim u ah mid kasta ganacsi, oo aad bay uga sii muhiimsan tahay a ganacsi la eCommerce website. Sales qalabaynta waa nidaam caawiya dadka wax iibinaya si ay u noqdaan kuwo hufan intii suurtagal ah. Waxaa muhiim ah in dadka wax iibinaya ay noqdaan kuwa wax ku ool ah intii suurtagal ah sababtoo ah inta badan iibka waxay sameeyaan, lacagta badan ee shirkadoodu sameyso, iyo lacagta badan ee shirkadoodu, waxay sii kordhiyaan guulaha ay ka helaan adeeg ahaan. Waxaa jira saddex walxood oo waaweyn iibka qalabaynta: daba gal, qalabaynta, iyo warbixinta. Sales qalabaynta waa dhan ku saabsan isticmaalka software si aad uga saarto hawlahaaga joogtada ah iyo kuwa soo noqnoqda iibka habka. Waxay kaa caawin kartaa inaad waqti ku bixiso si aad diirada u saarto dhinacyo badan oo muhiim ah ganacsi. Tusaale wanaagsan oo ah iibka qalabaynta waa awooda lagu jadwaleeyo iimaylada daba-galka ah. Hadii aad tahay qof yar ganacsi mulkiilaha ama a iibka rep, waxaa laga yaabaa inaad daalan tahay inaad wakhti badan ku bixiso maamulka oo aanad wakhti ku filan ku bixin iibka. Inta ugu yar ganacsi milkiilayaasha iyo iibka reps waxay isticmaalaan xaashiyaha ama qalabka sida Excel si ay ula socdaan hawlaha, hogaanka, iyo fursadaha.
Sales qalabaynta waa goosha dahabka ah ee suuqgeynta. Waa habka ugu wanaagsan ee aad naftaada uga dhigi karto mid wax ku ool ah intii suurtogal ah marka ay timaado xidhitaanka iibka. Waa hab aad wax badan u xidhi karto iibka dhakhso badan oo hufan waxayna kaa caawinaysaa in aad hubiso in aad ka shaqaynayso rajadaada saxda ah ganacsi. mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee aan arko kuwa yaryar ganacsi mulkiilayaashu waxay sameeyaan waa inay u qaataan sababtoo ah way yar yihiin ganacsi uma baahna qalab iyo qalabaynta. laakiin qalabaynta Kaliya kama saarayso dadka nidaamka, waxay sidoo kale kaa caawinaysaa samayntaada ganacsi ka hufan oo miisaan badan. Sales qalabaynta waxa uu ka caawiyaa ganacsiyada in ay si hufan u shaqeeyaan waxana ay ka caawisaa in ay wakhti badbaadiso. Waxay kaa caawin kartaa inaad waqti badbaadiso iyo inaad dhisato xiriir. Waxaa la yiri Sales qalabaynta waxay badbaadin kartaa ilaa 30 saacadood todobaadkii xaaladaha qaarkood. Taas macneheedu waxa weeye in aad diiradda saari karto waxyaalaha adiga kugu khuseeya.